Fanamasinana Miseho in mpanara-dia fampahafantarana an'i Jesosy | Apg29
Fanamasinana Miseho in mpanara-dia fampahafantarana an'i Jesosy
Fahamasinana sy ny famonjena na ny fanamarinana, dia tsy toy izany koa.
Ny famonjena na ny fanamarinana, mitranga ny faharoa mitodika amin'ny amin'i Jesosy, ary manosika ao am-pontsika. Fanamasinana na izany aza, dia fiainana lava dingana, izay miara-mandeha amin'i Jesosy fahamatoran'io maha olona sy ny Kristianina i Jesosy, dia afaka ny ho hita bebe kokoa eo amin'ny sy amin'ny alalan'ny fiainantsika, raha izao tontolo izao, ary ny hena dia lasa tsy mitarika kery eo amin'ny fiainantsika.
Ny teny hoe fahamasinana na avy amin'ny Testamenta Taloha Hebreo "Kadas", ary ao amin'ny NT ny teny grika hoe "hagiasmós", toy izany koa ny teny hoe fanamasinana ny fisarahana amin'izao tontolo izao sy ny "fanahy". Midika izany fa ny fisarahana izay tsy manaja izay masina sy ny tsy masina, ary fa tsy ho voatokana ho an'ny Tompo, ary hanamarina izay no azy.
Ny famonjena na ny fanamarinana, mitranga ny faharoa mitodika amin'ny amin'i Jesosy, ary manosika ao am-pontsika. Fanamasinana na izany aza, dia mandritra ny fiainana dingana, izay miara-mandeha amin'i Jesosy fahamatoran'io maha olona sy ny Kristianina i Jesosy, dia afaka ny ho hita bebe kokoa eo amin'ny sy amin'ny alalan'ny fiainantsika, raha izao tontolo izao, ary ny hena dia lasa tsy mitarika kery eo amin'ny fiainantsika.
John mahatonga ny famaritana ny teny hoe izao tontolo izao izay ny dia ny 1 Jaona 2: 15-16
" Aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ny fitiavana ny Ray ao anatiny. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao, ny nofo sy ny fanirian'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana ny tsara, dia tsy avy amin'ny Ray fa avy amin'izao tontolo izao. "
1 Tesaloniana 5:23 Hoy , "May ny Andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka ..." 2 Tesalonianina 2:13 milaza "... amin'ny fanamasinan'ny Fanahy sy ny finoana ny marina", Hebreo 2:11 dia miresaka an'i Jesosy no manamasina sy ireo izay masina. Ny teny hoe hamasino antsika: Jaona 17:17 "Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana."
Ny mpino manao asa-tena azo ny fanamasinana eo amin'ny fiainany: 1 Tesalonianina 4: 7.8.
Isika dia tsy hiaro ny fahotana eo amin'ny fiainantsika! fa raha ny Fanahy Masina nanondro miantra nataontsika, miaiky eo anatrehan'Andriamanitra, dia Andriamanitra dia hamela antsika sy hanadio antsika amin'ny fahamarinana rehetra. 1 Jaona 1: 9
Dia efa nantsoina ho amin'ny fiainam-pahamasinana
" Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotoana, fa ho amin'ny fiainam-pahamasinana. Noho izany, fa efa mandà, dia tsy mandà ny olona fa Andriamanitra, Izay manome anareo ny Fanahiny Masina. " 1 Th 4: 7, 8
6:19 tany Roma Mampirisika antsika mba hangataka ny mpikambana ao amin'ny fanompoana ny fahamarinana, ny fahamasinana, sy ny 2 Korintianina 7: 1 Mampirisika antsika fahamasinanay hahatonga lafatra ny fahamasinana.
Heveriko fa ny tena tahotra an'Andriamanitra, dia hery lehibe teo amin'ny fiainan'ny mpino mba hitady ny fahamasinana eo amin'ny fiainany. Inona no tiako ho mafy manasongadina!
Amin'ny fahamiramiranan'ny ny fahamasinan'Andriamanitra dia teraka ny tena fahatahorana an'Andriamanitra nahazo.
Izy no mendrika ny fanajana, subordination, fankatoavana, ny fo sy ny manetry tena fankasitrahana fitsaohana.
Tena zava-dehibe tsy mba handeha hiady, ary tsy miraharaha rehefa ny Fanahy Masina dia mampiseho antsika zavatra ao amin'ny Tenin'Andriamanitra, rehefa mamiratra ny zavatra izay te hahita fiovana eo amin'ny fiainantsika. Rehefa hoy Andriamanitra; Tsy mampifaly ahy, fa Tiako ho hijanona amin'ny, raha amin'ny fotoana toy izany, tsy mahalala izany fotsiny, na heverintsika aza, tsy izany mampidi-doza, ka nampahory ny ny Fanahy Masina. "Tsy hampalahelo ny Fanahy Masina, izay efa nahazo toy ny fanombohan-kase ho amin'ny andro fanavotana." Efesianina 4:30.
Raha ela rehefa tsy miraharaha ny Tompo dia manondro nivoaka, izay tsy fantany izy ireo ny Fanahy Masina tahaka ny feo iva-manan-danja eo amin'ny olona iray anatiny, ny iray lasa "blunted". Miteny matetika amim-pahanginana ao anatintsika.
Aho hanome ohatra avy amin'ny fiainako. Vao maraina aho nijery matetika loatra ao amin'ny TV. Aho dia mazava tsara traikefa rehefa hitako any an-TV fandaharana, na izay nataonay fa nisy ratsy be na ahitana izay zavatra tsy madio, ny fomba ny Fanahy Masina ato anatiko namaly ka lasa ory. Mety ho ohatra zavatra mampientam-po polisy Asehoy ny fandaharana na tantara fa nahita mahaliana, ary araka izay nahita. Rehefa nandalo ela, ary tsy niraharaha ny fampitandremana ny Fanahy Masina, ary nanohy ny mahita ny fandaharana toy izany, ka nanan-anaka intsony toy ny mazava tsara ny Fanahy Masina ny iva-key zava-tsarotra. Hitako intsony ny teny izay nataony lasa ory.
Fa inona no nitranga? Eny ary, ny zava-nitranga tao am-poko fa dia ho blunted momba ny fahamasinana 'Andriamanitra! Ny feon'ny Fanahy tamin'izany zavatra manokana efa saika nitsahatra. appallingly
Ankehitriny dia ho kely indrindra fijerena fahitalavitra. Eritrereto isika manana faritra rehetra fa ny Fanahin'Andriamanitra dia mampiseho fa tsy hampifaly azy, ary izay mila mibebaka.
Fanampiana amin'ny fanamasinana dia misy dingana. Fantatsika ampy amin'ny rehetra hoe impiry no nanandrana, manao azy ho ezaka ho tonga bebe kokoa "mpivavaka be" nohamasinina Kristianina, fa ny zavatra tsy manao izany. Tsy hadinoina, na tsy mahafantatra ny fomba manampy antsika amin'ny dingana fanamasinana.
Ao amin'ny Ezekiela 11:19, 20, dia mamaky
" Dia homeko fo iray izy, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatin'izy ireo. Hesoriko ny vato fo avy ao nofony ka homeko fo nofo, dia samy ho handehanany araka ny didiko sy mitandrina ny didiko, ka araho izany. Izy ireo dia ho oloko izy, ary Izaho kosa ho Andriamaniny "
ary ao amin'ny Hebreo 8:10, dia hitantsika izany teny fikasana izany. Galatiana 5:16 "Inona no tiako holazaina dia izao: Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy ho filan'ny nofo," ary ny andininy faha-25, "Raha miaina araka ny Fanahy, dia aoka isika handeha araka ny Fanahy."
Tsy ho ahy manokana kanefa niteny tamiko mazava tsara ao amin'io te-ho bebe kokoa an'i Jesosy sy matotra, dia ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 15. Eto i Jesosy dia miresaka momba ny tenany ho ny tena voaloboka / no tena voaloboka. Nilaza izy fa tsy amin'ny alalan'ny fa mitoetra ao aminy Izy no voaloboka, dia hitombo ny vokatra. Nilaza izy fa amin'ny förblivandet amin'ny voaloboka izy, dia Sampana (vi) mba hitondra vokatra manan-karena. Hoy koa i Jesosy eo amin'ny andininy faha-5 : "... raha misaraka amiko kosa ianareo, tsy mahay manao na inona na inona."
Ny sampany tsy mahay herinay na ezaka manenjika misy voankazo.
Ny Fanahy ny asan'ny fahasoavana ao amintsika, izay atao ao amin'ny Community 'i Jesoa ny tenany.
Mino aho fa ny manome fiainana ranon-kazon'ny Foto ny voaloboka, izay mamokatra voa, voaloboka, Heveriko fa azo lazaina ho ny sary ny Fanahy Masina, ny fiainana mavitrika.
Vokatry ny Fanahy voalaza ao amin'ny Galatiana 5:22. Mariho fa ny vokatry ny Fanahy , izay vao misondrotra. Tsy misy voninahitra mandeha ny sampana izay mitondra voa. Fa ny sampana mitoetra amin'ny voaloboka izy manao izany fa afaka mitombo vokatra.
Jereo ihany koa ao amin'ny Baiboly fa voavonjy ny olona dia tsy afaka miaina ny lalana olona maniry, ary tsy hiraharaha izay ny Fanahin 'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika. Dia efa nantsoina Jesosy ny maha-mpianatra "Ary niantso ny vahoaka sy ny mpianany ka nanao taminy hoe: Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka Ahy." Marka 8:34.
To hifarana amin'ny teny avy amin'ny Filipianina 4: 8, izay efa lasa dia velona ho ahy
" Ary rahalahy (sy anabavy), dia izay rehetra marina sy mendrika, marina, madio, na inona na inona mahafinaritra, sy ny estimating, eny, izay rehetra atao hoe hatsaran-toetra sy mendrika hoderaina, dia hevero izany."
My koa: Ho velona izany zavatra izany, ilazako izany zavatra izany.